आफ्नो होटलमा अचानक रजनीकान्त भेटिएपछि – Khabar Silo
एजेन्सी– भारतमा सुपरस्टार रजनीकान्तलाई भेट्न खोज्ने मान्छेहरु कति होलान् ? यसको अनुमान नै लगाउन सकिँदैन । तर, अचानक उनी कुनै होटलमा पुगे भने के होला ? त्यहाँको माहोल नै फेरिन्छ ।
अहिले नैनीताल घुम्न पुगेका रजनीकान्तमाथि यस्तै भएको छ । उनको नाममा होटल बुक गरिएको थिएन । तर, उनी अचानक होटलमा पुगे । त्यसपछि त त्यहाँ ठूलो महोत्सव नै भयो ।
होटलका सबैजना एकै ठाउँमा भेट भएर रजनीकान्तको स्वगात गरे । मनु महारानी होटलका जिएमदेखि त्यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारीले रजनीकान्तसँग फोटो पनि खिचाए ।
रजनीकान्तसँगै त्यहाँ उनकी छोरी ऐश्वर्या र म्यानेजर सन्जय पनि गएका थिए । अनि रजनीकान्तले त्यहाँ विशेष छलफलमा आफूलाई पहाडहरु मन परेको पनि बताए ।
अब त्यो होटलले रजनीकान्त आफ्नो होटलमा आएको प्रचार गर्ने बताएको छ । यो उनीहरुका लागि विशेष दिन सावित भएको छ ।
सातामा आठ हवाई उडानका लागि अमेरिका र चीनबीच सहमति
Posted on August 19, 2020 Author khabar silo
एजेन्सी – संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच हप्तामा आठ वटा हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अमेरिकी यातायात विभागद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार अहिलेसम्म चार वटा मात्रै उडान हुँदै आएकोमा अबदेखि हप्तामा ८ उडान गर्ने सहमति भएको हो । नयाँ सहमतिसँगै अमेरिकाबाट चीनतर्फ जाने र चीनबाट अमेरिकातर्फ आउने यात्रुहरुलाई सहज हुने विश्वास लिइएको विभागले जनाएको छ […]
१९१ यात्रु बोकेको एयर इन्डिया एक्सप्रेसको विमान दुर्घटना
एयर इन्डिया एक्सप्रेसको बोइङ-७३७ शुक्रबार साँझ केरलको कोजिकोडमा दुर्घटना भएको छ। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित १९१ जना यात्रु रहेको बिबिसीले जनाएको छ। विमान दुबईबाट आइरहेको थियो। नेपाली समयअनुसार साँझ करिब ७ बजेर ४५ मिनेट जाँदा कोजिकोड एयरपोर्टमा अवतरण क्रममा रनवेबाट चिप्लिएर विमान दुर्घटना भएको हो। विमान अवतरण क्रममा भारी वर्षा पनि भइरहेको थियो। विमान दुर्घटना […]
कुलमान घिसिङले सुरु गरे कार्यसम्पादन सम्झौता : काम गर्नेलाई पुरस्कार, नगर्नेलाई दण्ड !